Okuqukethwe okwengeziwe, Izinkinga Eziningi: Umshikashika Wentengiselwano Yokuthengisa | Martech Zone
Besilokhu sishicilela kancane ngamathuluzi aqondanisa imizamo yokuthengisa nokumaketha. Ngokubona kwami, abamele abathengisi banomsebenzi onzima kakhulu ukuwenza kulezi zinsuku. Ama-59% wesikhathi sabo enza imisebenzi ngaphandle kokuthengisa njengokucwaninga i-akhawunti nokukhiqiza imikhondo. Futhi abathengi namabhizinisi bayakwazi ukwenza ucwaningo olungajwayelekile ku-inthanethi, behlola izici, izinzuzo, imikhiqizo, izinsizakalo, izilinganiso nokubuyekezwa.
Ngaphandle kobuningi bezinto zokuthengisa ezitholakalayo, Ama-40% wezinto zokumaketha awasetshenziswa amaqembu okuthengisa. Ezinkampanini ezingakwazi ukuqhubeka, abameleli bezentengiselwano bayehliselwa uku-oda abathathiwayo ngaphandle kokuthola ithuba elikhulu lokwenza umnikelo obalulekile. Ezinkampanini ezingaphambi kwejika, abamele abathengisi bahlome ngokuphelele ngakho konke okuqukethwe abakudingayo ukusiza ukuthola izinhloso zalokho okulindelekile, ukwakha igunya nokwethembana nabo, futhi babaqondise ekuphikiseni kumjikelezo wokwenza izinqumo.
Lokhu infographic evela eQvidian uhamba usuku lonke empilweni yomthengisi wesimanje we-B2B, egqamisa izinselelo ezivelayo endleleni. Ngabe abathengisi bakho bayazi ukuthi bakusebenzisa nini futhi kanjani konke okuqukethwe, amathuluzi, nokuqeqeshwa obanikeze bona ukuze babe ngabeluleki abathembekile abathengi abalindelayo?
Abathengisi abangu-8 kwabangu-10 bazizwa ukunqotshwa inani lemininingwane kufanele babheke, okuholela esikhathini esiningi esichithwa ukuhlela nokuhlaziya amaqiniso. Amandla okuphendula nokusabela kuzidingo zethemba abaluleke kakhulu kunakuqala… futhi ukumaketha kudinga amandla okuthengisa amandla ezinkampanini ukuze abamele abathengisayo bakwazi ukuhlinzeka ngokuqukethwe okulungile ngemiyalezo efanele ngokushesha lapho kudingeka noma kuceliwe.
Tags: hlaziya izidingovalaLandelelaulwazi lokulayisha ngaphezuluinterviewukuhola isizukulwaneukuqondanisa nokumaketha nokuthengisaukuxoxisanaukuxoxisanasamanjeithembaiqvidianokuqukethwe kokuthengisaukusebenza ngokuthengisaUkunika Amandla Ukuthengisaomele ezokudayisaumthengisiIzikhungo
Izifanekiso ze-iOS ne-Android App Icon Photoshop